Warqad Ibrahim Afaghani u diray hogaamiyaha Alqaacida
Topnews: Warqad Ibrahim Afaghani u diray hogaamiyaha Alqaacida "Godane waa diiday Kitaabka alle" Sir Culus.
07 April 2013 Waagacusub.com-Khilaaf mudo dheer u dhaxeeyay hogaamiyeyaasha Al-Shabaab ayaa ka tilaabay xadkii GACMO GEELJIRE HOOS BAA LOO DHAQAA,.wuxuuna gaaray in Hogaamiyaha Mayalka adag ee Ibrahim Xaaji Jamac Meecaad Afaghani warqad dacwada u diro hogaamiyaha Alqaacida Ayman Al Dawaahiri.
Warqada Ibrahim Afaghani oo ku qoran Carabi waxaa lagu baahiyay Website-ka Alqaacida ee aljahad.com ,wuxuuna ku sheegay in Amiirkooda Ahmed Godane laga taagan yahay khaati bilaahi kadib markii uu diiday in lagu kala baxo Kitaabka alle. Ibrahim Afaghani oo Alqaacida ugu hoowlgala magaca Abuubakar Al zeylaci wuxuu yiri " Waxaan warqadaan kuugu soo dirayaa inaan kugu wargeliyo in Amiirkeena Ahmed Godane dhibaato weyn ku hayo Mujaahidiinta Alqaacida ee joogta gudaha Somalia,waxaan hoosta ka xariiqayaa inuu kala diray Golahii Maxkamadda sare ee Islaamiga ,inuu diiday in lagu kala baxo Kitaabka,inuu dagaalyahanada iyo Culumada joogta Somalia kula kacay hanjabaad iyo dilal"
Ibrahim Afaghani oo ka dhigan ninkii labaad ee dhisay Dagaalyahanada Alqaacida ee ka dagaalama gudaha Somalia dhalasho ahaan ka soo jeeda beesha Isaaq,Habar awal,Sacad Muuse,reer Shirdoon ,wuxuu kelmadahiisa u dhigay sida nin quus ka jooga Ahmed Godane,wuxuuna yiri:-
Culimada iyo Ducaadda Rabaaniyiintaa ayaa isku dayey in Sheekh Abuu Zubayr uu u hogaansamo Maxkamadda Islaamigaa iyo in lagu kalo baxo Kitaabka Allah iyo Sunada Nabiga CS, kadib markii Cabasho iyo Dulmi badan laga dhawaajiyey, da’daal dheer oo Culimadu galeen oo Sanado qaatay iyo iskuday badan ayaa kudhamaaday in Sheekh Abuu Zubayr uu meesha ka saaro in lagu kalo baxo Kitaabka Allah iyo Sunada Nabiga CS, Asaga oo Adeegsaday xeeladaysi Dulmi u dheer yahay sida,
1- Culimadii oo uu diiday in uu u hogaansamo,
2- Maxkamaddii Islaamiga ahayd oo uu Amar ku kala diray,
3- Xukunkii Maxkamadda Islaamigaa iyo Culimadu soo saareen oo uu gaashaanka kudhuftay.
4- Hanjabaad uu u jeediyey Culimada Mujaahidiinta iyo Ducaad haddii aan Idiin sheegno Magacyadooda Habayn iyo Maalin Ilmadu Indhihiina ka dhammaanayso, Allahu Mustacaan!,
Dhambaalkaan Ibrahim Afaghani u qoray Hogaamiyaha Alqaacida ayaa ka marqaati kacay in la jooga dhamaadkii Argagixisada Somalia maadama ay ka been sheegeen shareecada Islaamka,naftana ka jareen kumanaan aan waxba galabsan,ahna dimbi laabayaal.
Halkaan ka akhri Warqada Ibrahim Afaghani u diray Ayman Al Dawahiri markaas waxaa laga yaabaa inaad yaabtid ,oo madaxa qabsatid.
Shacabka Koofurta Soomaaliyeed waxay naawilayaan in maalin uun Cadaalada la horgeyn doona Hogaamiyeyaasha Alshabaab ee xasuuqa ba''an ka geystay gudaha Somalia.